किन परिवर्तन हुँदैछन् कोरोनाका लक्षण ? ओमिक्रोन र डेल्टाका लक्षणमा के फरक ? - Aarthiknews
किन परिवर्तन हुँदैछन् कोरोनाका लक्षण ? ओमिक्रोन र डेल्टाका लक्षणमा के फरक ?
एजेन्सी । कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएको केही दिनपछि विश्वभरका डाक्टरहरूले नयाँ र पुरानो भेरियन्टको भिन्नता बुझ्न थालेका छन् । डेल्टा संक्रमणहरूमा गन्ध र स्वाद गुमाउनु सामान्य थियो । ओमिक्रोनका बिरामीहरूले फ्लू जस्तो लक्षणहरू अनुभव गरे । कोरोनाको अघिल्लो संस्करणमा सुख्खा खोकी र ज्वरो मुख्य लक्षण थियो ।
बेलायतको ZOE Covid Study App मा हरेक दिन हजारौं कोरोना बिरामीहरूले आफ्ना लक्षणहरू दर्ता गर्छन्। एपसँग सम्बद्ध वैज्ञानिकहरूले कोरोनाको अघिल्लो संस्करणहरू जस्तै अल्फा र बिटाका लक्षणहरूलाई डेल्टा र ओमिक्रोनका लक्षणहरूसँग तुलना गरेका छन्। यस तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा यो पत्ता लागेको थियो कि भाइरस म्युटेट हुनुका साथै यसका लक्षणहरु पनि तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका छन् ।
एपसँग काम गरिरहेका डाक्टर क्लेयर स्टिभ्स भन्छिन्, 'ओमिक्रोनका लक्षणहरू चिसोको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो छन्। यो विशेष गरी रोगीहरूमा देखिन्छ जसले खोपको दुवै डोज लिएका छैनन्। यद्यपि यो डाटा बेलायतका मानिसहरूको हो । कोरोना लक्षणहरूको यो ढाँचा अन्य देशहरूमा पनि उस्तै छ ।'
डा. जर्ज मोरेनो भन्छन् ओमिक्रोनको प्रारम्भिक लक्षण घाँटी दुख्ने र चिलाउने हो । यो पनि यसको संक्रमणको मुख्य लक्षण हो। शरीरमा यी लक्षण देखा परेको दुई दिनपछि रुघाखोकी, टाउको दुख्ने र मांसपेशी दुख्न थाल्छ । महामारीको सुरुमा सुख्खा खोकी कोरोनाको मुख्य लक्षण हुन्थ्यो। यो लक्षण अझै पनि यथावत देखिएको छ । तर, यसको तीव्रता उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । खोपले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भएकाले बिरामीमा श्वासप्रश्वासको समस्या कम हुने उनको भनाइ छ ।
ZOE Covid Study App को अनुसार, डेल्टा संक्रमणको बेला अधिकांश बिरामीहरूमा गन्ध गुमाउनु सामान्य थियो। मार्च २०२१ मा, जब बेलायतमा डेल्टा भेरियन्ट पुष्टि भएन, १६ देखि ६५ वर्षका करिब ६० प्रतिशत मानिसहरूले श्इभ् एपमा यो लक्षण दर्ता गरेका थिए ।
डा. मोरेनोका अनुसार हल्का लक्षणहरू हुनुको कारण भ्याक्सिनका कारण प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो हुनु हो। डा. मोरेनोका अनुसार हल्का लक्षणहरू हुनुको कारण भ्याक्सिनका कारण प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो हुनु हो ।
यतिबेला वैज्ञानिकहरुलाई पनि थाहा छैन किन कोरोनाका लक्षणहरु यति छिटो परिवर्तन भइरहेका छन् । कतिपय विज्ञहरूका अनुसार जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई खोप लगाएका कारण कोरोनाका लक्षणहरू हल्का हुँदै गएका छन् । एकै समयमा, केहि अनुसन्धानकर्ताहरूले भने कि ओमिक्रोन पहिले नै यसको उत्परिवर्तनको कारण हल्का छ ।
हालैका दुई अनुसन्धानमा वैज्ञानिकहरूले ओमिक्रोन कोरोनाका अन्य भेरियन्टहरूभन्दा कम खतरनाक भएको पत्ता लगाएका छन्। ओमिक्रोन बिरामीहरूमा डेल्टाको तुलनामा अस्पताल भर्ना र मृत्युको जोखिम २५ प्रतिशत कम देखिएको छ ।
डा. मोरेनोका अनुसार हल्का लक्षणहरू हुनुको कारण भ्याक्सिनका कारण प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो हुनु हो । खोप लगाएका बिरामीभन्दा खोप नपाएका बिरामीलाई सङ्क्रमण हुँदा बढी पीडित हुने उनीहरूको भनाइ छ । खोप लाग्नुअघि १०–१४ दिनसम्म मानिस बिरामी हुने गरेको भए पनि खोप लगाएको ५–७ दिनमा मात्र निको हुन्छ ।
कोर्भेभ्याक्स खोपको मूल्य घट्यो
सात जनामा कोरोना संक्रमण हुँदा ९ जना निको भए
उत्तर कोरियाले जारी गर्यो कडा मापदण्ड
भारतमा कोरोनाका एक दिनमा दुई हजार ९५८ कोरोना सङ्क्रमित
थप सातमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
उत्तर कोरियामा कोरोनाबाट एक जनाको मृत्यु भएको पुष्टि